Dr. Tint Swe's Writings: ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရော
1. ကျနော့်အသက် ၂၇ပါ ဆံပင်တွေကျွတ်တာ နဖူးတောင်ပြောင်လာပါပြီဆရာ ဆံပင်ဆေးဆရာဝန်တေနဲ့ ဆွေးနွေးတာ ဟော်မုန်းကြောင့်တဲ့ပြောတယ်ဆရာ ဟော်မုန်းဓာတ်မညီတာဆိုတာဘာပါလဲဆရာ ပြီးတော့ ကျနော် လည်ချောင်းတေလဲ တအားပူပြီး မူးတတ်တာရော ဟော်မုန်းနဲ့ဆိုင်ပါသလားဆရာ ဘာဆေးသောက်ရင် အထောက်ကူပြုနိုင်ပါလဲဆရာ ကျနော်က နယ်ဘက်ကပါ ဆရာ ကျနော့်မှာ မေမေပဲရှိပါတော့တယ် မေမေကလဲ ကင်ဆာနဲ့ပါ ဆံပင်တေကျွတ်တော့ ဆရာဝန်တေနဲ့ ဆွေးနွေးတာ ကုရင် တအားဈေးနှုန်းတေများလို့ပါဆရာ
2. Female ပါ အပျိူပါ ရာသီက ပုံမှန်ပါပဲရှင့် ဖြစ်နေတာက မျက်လုံးတွေက ယားတော့ လက်နဲ့ပွတ်ပါတယ် လက်နဲ့ ပွတ်ပါများတော့ မျက်လုံးတေကပူပြီး မျက်လုံးကနီပြီးဝါလာပါတယ် မျက်ရည်ပူတေလည်း ကျပါတယ်
3. ကျနော် goitre ဖြစ်နေတယ် သံသယရှိလို့ သွားပြကြည့်ပါတယ်ဆရာ Result တေအရ ဘာ treatment မှ မလိုဘူးပြောပါတယ်ဆရာ
4. ဆရာ ကျွန်မ အသက် ၂၇ ပါ ကိုယ်ဝန် ၂၁ ပတ်ထဲမှာပါ ကလေး ဆံပင်တေသန်ဖို့ အရပ်ရှည်ဖို့ ဘာတေ စားသင့်ပါလဲ ဘာဓာတ်တေလိုအပ်ပါလဲဆရာ
5. ဆရာရှင် သမီးကျောက်ကပ်ရောင်ပါတေရှင် ဘယ်ဆရာအကောင်းဆုံးဆိုတာသိရှင်ပါတေရှင်
6. ဆရာရှင် အသက်က ၂၉နှစ်ပါရှင်။ မျက်နှာမှာ အမည်းစက်တေဖြစ်တာ အိမ်ထောင်မကျခင်ကတည်းကပါ။ အမည်းစက်တေလို့ရေးတာ မှားတယ်။
7. ဆရာရှင့် Valprol CR-300 Depakine-200mg Quatapine ဒီဆေးတေပါ Valprol ကတော့ စိတ်တအား တက်နေချိန်ဆို သောက်ပါတယ် Depakineနှင့် Quatapine ကတော် စိတ်ပြန်ကျနေချိန်ဆို သောက်ရပါတယ်ဆရာ ဆရာကြီး ဦးဝင်းအောင်မြင့်နဲ့လည်းယခုချိန်ထိပြနေရပါတယ်ဆရာ ဆေးလေးတေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးများ သိချင်လို့ပါဆရာ
8. ဆရာရှင့် စိတ်အတက်အကျဆေးတေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတေသိချင်ပါတယ်ရှင့် မောင်လေးသောက်နေရတာ ၂နှစ်နီးပါးရှိနေပါပြီ ပြီးတော့စိတ်ဆေးတေကတသက်လုံးသောက်ပေးရမှာလားရှင် သူဖြစ်နေတာက manic ပါဆရာ
9. ဆရာရှင့် တားဆေး Depo ထိုးပြီးရင် အာ့သုံးလအတွင်း ကလေးမရနိုင်တာသေချာပါသလားရှင့် ကျွန်မက အခုအစထိုးရမာမို့ပါ အလုပ်တေကြောင့် ကလေးမလိုချင်သေးလို့ပါရှင့် ဖြေပေးပါဦး သုံးလပြီးရင်တော့ကလေးယူတော့မာပါ တားဆေးသုံးလို့ဆိုးကျိူးတေကရောဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ
10. ဆရာရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါရှင့် သမီးလေးမှာအဲ့လိုအဖုလေးတေပေါက်နေပါတယ် ချိုင်းကြားတေ ပေါင်ကြားတေမှာရောပါ ဆေးခန်းတေလည်းသွားတယ်မသက်သာလို့ပါဆရာရှင့် ဘာဆေးလိမ်းရမလည်း ဘာဆေးသောက်ရမလည်း ဆိုတာ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ်ဆရာရှင့်
11. မင်္ဂလာပါဆရာ ကျနော့အသက် ၂၃ပါ ဆရာ အာသီးရောင်နေတာ သုံးပတ်ကျော်နေပြီဆရာ မပျောက်သေးဘူး ကျနော်ဘလိုနေထိုင်ရမလဲဖြေပေးစေလိုပါတယ် လည်ပင်းအကြောတေလဲတင်းနေတယ်ဆရာ
12. ဒေါက်တာ ကျွန်မက အသက်၂၄ပါ အရင်လတေက အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ပါတယ် ၉လပိုင်းအထိ သောက်ခဲ့ပါတယ်
တေ မဟုတ်။ တွေလို့ရေးရတယ်။ ၁၂-၉-၂၀၁၈ ကနေ့တရက်တည်းမှာ တေလို့သာရေးတဲ့မေးခွန်း ၅ ခုလာတယ်။ တေရာဂါဖြစ်တာ တနှစ်သာသာလေးရှိသေးတယ်။
တေ = ခပ်ပြာ = ရွှေတုရွှေယောင်၊ ထောင်းထုနှိပ်နယ်သည်
တေ နှင့် ပီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_68.html
တွေ နှင့် တေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_480.html
တေဆေး သောက်သူများ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_36.html
အဲလိုတေနေသူတွေ ရှိသေးတယ်။ မှတ်မထားအားလို့။ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုပြီး မြန်မာစာကို ဖျက်ဆီးခဲ့လို့။
Boomerang ပြန်လာအောင် ပစ်လိုက်ခြင်း
Sweet December ဆွိဒီဇင်္ဘာ
တွက် နှင့် တွတ်
1Q 84 စာအုပ်
Rodenticide and Atropine ကြွက်သတ်ဆေးနှင် ဖြေဆေး
Twins ပူးဆိုတာ အမြွာပူး
အာဖကန် နှင့် အမေရိကန်
Rheumatic skin disease အရေပြားလေးဖက်နာ
Urinary Tract Infections ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
FB Community Standards Are Irrelevant
Black Friday ဘလက် ဖရိုင်းဒေး
အရုပ် အရုပ် အရုပ်
Spanish Fly စပိန်လုပ် ယင်ကောင်က ထုတ်တဲ့ဆေး
နွေတရာလမ်း ကြွေ ကြွေနွမ်းပြီ
Nescafe Coffee ကော်ဖီ
အန္တရာယ်ရှိသော မြို့ ရွာ ရပ်ကွက် အမည်များ
Gemron Gold ဘယဆေး သတိပေးချက်
ချစ်သူနှင့်ဝေး တို့မလေးကား ရေးလည်းမတတ် ဖတ်မတတ်နှင့်
Bargaining ဆေးကုသတာမှာ ဈေးဝယ်သလို ဈေးမဆစ်သင့်ပါ
ICJ မှာ တရားစွဲခံရမှုအပေါ် သင်ခန်းစာယူပြီး တပ်မတော် ...
မောင်ထွန်းသူစာအုပ်များ သို့မဟုတ် အမှန်နှင့်အမှားရေ...
Buddha Statues ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်များ
Hypothyroid in Children ကလေး လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်းန...
Do Not As I Say ကျွန်တော်ရေးသလို မရေးနဲ့
ICC and USA အိုင်စီစီနဲ့ အမေရိကန်
တညီတညာ အနီးလာ ဆရာ မိဘ အားထားရ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ICJ မှာရ...
Professor Age ပညာရဲရင့်
2 Hours ၂၄ နာရီ
ICJ Idol IDC ရောဂါသုံးမျိုး
Chemotherapy ခီမိုအတွက် (၁၅) ချက်
Body hair တလွဲဆံပင်ကောင်းချင်သူများ
Stroke မြန်မာစာ လေဖြတ်နေတယ်
Rosacea သတ်ပုံမှားတာကိုတော့ ကော်တီဇုန်းဆေးနဲ့ မပျေ...
Knee Sprain ဒူးနားခိုက်မိခြင်း
Skin Tags အသားပိုလေးတွေ
Cereal ဆီရီရယ် မနက်စာ
Christmas Cactus ပန်း
တသက်လုံးက မစွံတဲ့ အပျိုကြီး
တို့ဆေးထက် ပိုဆိုးတဲ့ နောက်တမျိုးလာပြီ ရှူဆေး
Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆိုတာ အင်မတန်ဆန်းတယ်
Sesame-Peanut Bars မြေပဲယို နှမ်းပြစ်
Breast pain ရင်သားနာတာ ဘာလို့ပါလဲ